Well, oo aan xusuusan jir ah waalan Thundercats cartoon ka 80 ee? Dhab, waxa ay ahayd maal ee kids ee wakhtigaas iyo ciyaaraha ka talaabsan ogyahay in. Waxay kuu keeni waayo cusub oo ay ku naadi bonus free oo ku salaysan Afyare theme.This isla bixisaa qaar ka mid ah animations cartoonish weyn iyo muuqaallo kale. metelin atoorayaal halkan waa inay kuu keenaan kaamamka Barakacayaasha ah oo lacag iyo aad maalin. So spin the reels and get rollin’!
Heli naadi cajiib ah bonus free la geesiyaal ah
Kaasu waa qurbaan Afyare shan ambadeen a 30 paylines on 4 saf. Waa Afyare a yar adag laakiin si siman xiiso leh iyo faa'iido iyo sidoo. Awood ay guul ugu badan ee booska tani waa shir sanadeedkii a 250000. seeftii, logo Afyare ee, scratchers dib, gaariga iyo surfboard ka kooban oo ka mid ah calaamadaha-qiimaha sare. Calaamooyinka low-qiimaha waa kaararka ciyaareed caadiga ah sida J, S, K iyo Ace. Inta badan meel la degan qof weyn on top, kaas oo ma ahan oo kaliya waxaa decoration. Astaanta duurjoogta ah waa Tygra oo badali karto oo dhan calaamado kale si ay u sameeyaan ka combos guuleystay.
gunooyin sanqadh ka Thundercats
Mid kasta oo ka Thundercats ah, Libaaxa-O, Cheetara, Panthro, cat duurjoogta ah iyo Tygra Abaal marin ku caashaqay Afyare la gunno gaar ah oo iyaga u gaar ah. The Lion-O darayaa wilds random, Tygra oo dood ka wilds ballaarinta muuqdo. Cheetara markii dalalkii ku ambadeen wax ugu horeysay ku dar wilds dheeraad ah. Panthro ku darayaa calaamadaha nuqul oo Cat Wild bixisaa laba wilds Mire Waqaf oo ay weheliyaan 2x multiplier a.
Tani naadi bonus free sidoo kale bixisaa feature bonus wheel onkod, kaas oo ku darayaa xeer gooni ah lacagihii in Afyare.
Ultimate Thunder dhigeeysa: wilds Mire Waqaf oo ku saabsan 3 duntu la 5 dhigeeysa free
Mumm-Ra Free dhigeeysa: wilds Expanded la 10 dhigeeysa free
Slithe Free dhigeeysa: wilds dhagta oo ay la socdaan 10 dhigeeysa xor ah oo 5 dheeraad ah lagu dari karaa.
Monkian Free dhigeeysa: 10 dhigeeysa lacag la'aan ah goobaha kulul Wild
Jackalman Free dhigeeysa: multiplier sii kordhaysa oo ay la socdaan 10x 10 dhigeeysa free
Intaa waxaa dheer, Snarf mar walba ka muuqan karaa oo kor loogu qaado badiyeen in this la yaab leh naadi bonus free. feature duntu onkod bonus waxa ay kordhisaa size ee Afyare si ay u 8 saf. saf Sidaa more, guul more.
Tani waa booska aad buu u abaal badan oo muuqaalada bonus. Tilmaamo bonus waa adag halkan Afyare this laguma talinayo bilowga ah. Tani waa heer sare xiiso leh naadi bonus free oo bixisa hooseeyo si ay cadow dhexdhexaad ah. Waxay bixisaa hufan RTP ah 95.5%. Sidaas waxa aad sugayso, u diyaar degdegga weyn la Thunder-bisadaha!
kasiinooyinka New 2016 | Lagaa Free £ 5 | Coinfalls Casino